भाइरल जोडी बखत बिस्ट र प्रतिभा बिस्टको सबैलाई रुवाउने पहिलो गीतको (भिडियो हेर्नुहोस्) « Onlinetvnepal.com
भाइरल जोडी बखत बिस्ट र प्रतिभा बिस्टको सबैलाई रुवाउने पहिलो गीतको (भिडियो हेर्नुहोस्)
Published :6November, 2018 7:15 pm
प्रतिभा बिस्ट र बखत बिस्टको ३ करोड नेपालीलाई रुवाउने पहिलो गीत, बखत बिस्टले लेखे आफनै जीवनमा मेलखाने गीत, प्रतिभा बिस्ट र बखत बिस्टको अभिनय रहेको भिडियो ! हजुरहरु सबैलाई तिहारको शुभ कामना : भिडियो मन परेमा लाइक , शेर , कमेन्ट गर्नुहोस !!नेपालको भाइरल जोडीको गीत बजारमा आएको छ । भाईरल जोडी बखत बिष्ट र प्रतिभा चौधरीले लेखेको पहिलो गीत ‘बनाउ नेपाल’ बजारमा आएको हो । उनिहरुले लेखेको गीतलाई गायक कर्णराज गिरिले निकै आकर्षक पारामा आवाज भरेका छन् ।
नेपाली युवा विदेश गएर नभई स्वदेशमै संघर्ष गरेमात्रै मुलुक समृद्धिको बाटोमा लम्कने उनको बुझाई छ । आगामी दिनमा पनि यस्तै गीतमा कलम चलाउने उनको भनाइ छ ।पश्चिम नेपालका बखत र प्रतिभाले आपसमा विवाह गरेपछि यो जोडी अहिले संसारभर भाइरल भइरहेको छ । देश विदेशमा बस्ने धेरैले यो जाडीको प्रसंसा गरीरहेका छन् । उनिहरु अहिले काठमाण्डौमा बसेर संघर्ष गरीरहेका छन् । भिडियो :